Fanontaniana&Valiny niarahana tamin’ny “Language Warriors PH”, tambajotranà mpandika teny ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Language Warriors PH no hitantana ny kaontyTwitter @AsiaLangsOnline ny 22-28 Jolay 2020
Voadika ny 28 Jolay 2020 14:19 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Esperanto , Português, Ελληνικά, English
Fangon'ny “Language Warriors PH”, noforonin'i Elsie Marie Or. Fampiasàna nahazoana alàlana
Taorian'ny fanentanana nahitam-pahombiazana tamin'ny taona lasa tety anaty media sôsialy nentina nankalaza ny fahamaroam-piteny an-tserasera manerana an'i Azia, hitohy mandritra ny 2020 ny tetikasa ifandrimbonana. Isankerinandro dia hisy hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ireo mpikatroka sy mpanandrateny samihafa ho an'ny fiteny, hizara ny zava-niainany, ny fanao tsara indrindra, ary ireo lesona azon-dry zareo tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny teratany, miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'izay anjara toerana raisin'ny aterineto. Ity fanentanana ity dia fiarahana miasa eo amin'ny Rising Voices, ny Digital Empowerment Foundation, ary ny O Foundation.
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Kristina Gallegos (@mksgallego), solontenan'ny tambajotra mpandika teny “Language Warriors PH”, izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy ireo.
Rising Voices (RV): lazalazao anay ny momba ny Language Warriors PH azafady.
Language Warriors PH (LWP): Language Warriors PH dia hetsika iray ety anaty aterineto, natomboky ny Departemeantan'ny Teny, Anjerimanontolo Diliman ao Filipina, izay mikendry ny hampifandray ny vondrompiarahamonin'ireo mpandika teny sy mpankafy ary mpikatroka ho an'ny fiteny manerana an'i Filipina, izay miasa amin'izao fotoana izao handika ireo fitaovana sy antontan-kevitra mifandray amin'ny areti-mandringana COVID-19 ho amin'ireo fiteny marobe ao Filipina.
RV: Ahoana ny toerana misy ireo fiteny iasànareo ety anaty sy ivelan'ny aterineto, amin'izao fotoana izao?
LWP: Manam-piaviana avy aminà fiteny maro isankarazany ireo mpikambana ao anatin'ny “Language Warriors PH”. Ireo fiteny filipiàna ampiasain'ireo mpikambana ao anatin'ny “Language Warriors PH” dia samy manana ny tahan'ny maha-zavadehibe azy avy. Araka ny lazain'ny EGIDS (Ethnologue), ny tahan'ny maha-zavadehibe azy dia miovaova, avy amin'ny Nasiônaly (Filipino), ny Ifandraisana Be indindra (Bikol Central, Cebuano, Hiligaynon, Ilocano, Masbatenyo, Pangasinan, Tausug, Waray), ny Enti-mampianatra (Akeanon, Chavacano, Kinaray-A, Surigaonon), ny Andalam-pivoarana (Cuyonon, Inonhan, Maguindanaon), ny Mavitrika (Capiznon, Ivatan), ary ny Tandindonin-doza (Ibatan). Marobe amin'ireo teny voasolo tena ao anatin'ilay vondrona no manana ny vondrompiarahamoniny ety anaty aterineto, izay mampifandray ireo mpampiasa ilay fiteny sy mitàna ny toeran'ny sehatra ho fanapariahana torohay, toy ireo fitaovana sy antontan'kevitra momba ny fahasalamam-bahoaka mahakasika ny COVID-19.
RV: Mikasika lohahevitra inona no kasainareo hifantohana ?
LWP: Voalohany, horesahanay ny tontolon'ny teny eto Filpina, indrindra fa ny maha-zavadehibe ireo fiteny 180 mahery ananany. Avy eo, horesahanay ny momba ireo vokatra avoakan'ny “Language Warriors PH”, mifantoka amin'ireo tahirinkevitra ho an'ireo fitaovana momba ny COVID-19 vokarin'ireo vondrompiarahamonina eo an-toerana ao Filipina, izay mirakitra ireo volana maro tany am-boalohany nametrahana ny fihibohan'ny fiarahamonina tao Filipina (Martsa hatramin'ny May 2020). Hozarainay ireo fironana hita ao anatin'ny asa fandikàna nandritra io vanimpotoana voalaza io, indrindra fa ireo karazana torohay nadika (ny fahasalamana ara-batana ara-tsaina, ny sôsialy sy ny toekarena, ny fanohanana, sns..), tamin'ny fiteny inona (ireo izay efa nambara etsy ambony), nataon'iza (mpandika nanao asa an-tsitrapo, mpandika matianina, governemanta), ary farany, ny fomba nanapariahana ireo fitaovana nanaovana asa fandikàna, ny fomba nahazoana azy ireny ary ireo teny ampiasain'izay hampiasa azy. Kasainay ihany koa ny hanasongadina hetsika sy vondrona manokana mpanao asa fandikàna, ireo drafitra sy vinavina amin'ny hoavy ho an'ny “Language Warriors PH”, ary farany, hampiditra tetikasa sy hetsika vitsivitsy ataon'ny Departemantan'ny Teny ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Filipina.
RV: Inona no tena antony manosika ny fikatrohana nomerika ataon'ny Language Warriors PH? Inona no fanantenanareo sy nofinofinareo ho an'ireo fiteny ampiroboroboin'ny vondronareo?
LWP: Natomboka ny “Language Warriors PH” satria nisy ny filàna mampita ireo torohay manandanja momba ny fahasalamam-bahoaka mifandraika amin'ny COVID-19 mba ho amin'ny fiteny ampiasaina sy takatry ny olona. Maro amin'ireo antontan-kevitra novokarin'ny governemanta nasionaly sy eny an-toerana no tsy misy afa-tsy amin'ny fiteny anglisy sy filipinô fotsiny, ary tsy natao mba ho mora raisin'ireo olona tsy mampiasa ireo fiteny ireo.
Mba hiatrehana io olana io, nisy vondrompiarahamonina mpirotsaka an-tsitrapo mpandika teny nanomboka nandika ireny antontan-kevitra ireny ho amin'ny fitenin-dry zareo, indrindra fa nandritra ny volana voalohany nanaovana ny fihibohana. Avy eo, ny ‘Language Warriors PH’ dia naka toerana ho toy ny habaka iray ahafahan'ireo mpandika tsirairay mifandray, mifampizara ny asa vitany sy ny loharano ananany, mangataka amin'ireo mpandika hafa mba hanampy azy amin'ny famokarana ireo antontan-kevitra, ary mba haharaka izay fanavaozana momba ireo fironana ankapobeny amin'ny resaka votoaty novokarina.
Farany, ny zavatra hita sy izay novokarin'ny “Language Warriors PH” dia ho fototra hiaingan'ny famoronana tolokevitra ara-pôlitika hanampy amin'ny fanatsaràna ireo taridalan'ny fanjakàna momba ny fanapariahana ireo torohay manandanja hatao amin'ireo fiteny fampiasa sy takatr'ireo Filipiàna. Antenaina ihany koa fa na aorian'ny fandalovan'ny areti-mandringana COVID-19 aza, hanohy ny asany ny “Language Warriors PH” ho toy ny sehatra iray fanaovana tetikasa iombonana, miaraka sy eny anivon'ireo vondrompiarahamonina ao an-toerana, amin'ny fampiroboroboana sy fanomezana aina vao indray ireo fiteny teratany ao Filipina.
Tantaran'ny Media-sôsialy farany
25 Aogositra 2020Mediam-bahoaka
18 Aogositra 2020Mediam-bahoaka
Fanontaniana & Valiny: Fantaro i Pushker Kadel, manampahaizana manokana amin'ny fiteny, fanabeazana ary fampandrosoana
12 Aogositra 2020Mediam-bahoaka
Fanontaniana & Valiny: Fantaro i Rany Phok, mpikatroka ho an'ny fiteny Krung